Huawei ga-aga n'ihu n'ichepụta ndị na-emepụta Kirin ya n'enweghị nsogbu | Gam akporosis
Ume ikuku ohuru maka Huawei: ogha n’iru n’iru imeputa ndi Kirin ya
Ọnọdụ Huawei ugbu a adịghị mma. Na veto nke United States rụrụ ọ na-emebi budata ndị Asia. Ahịa ekwentị ha dara na Europe na, ụnyaahụ anyị chọpụtara na mbinye aka ahụ enweghị ike iji oghere kaadi microSD na azịza gị. Mana n'ikpeazụ ozi ọma maka Huawei.
Ee, onye nrụpụta nke Shenzhen ga-enwe ike ịga n'ihu na-arụpụta ụlọ ọrụ Hisilicon Kirin SoC. Ihe kpatara ya? TSMC agaghị akpọ isi ala na mgbochi gọọmentị US. Mba, ọ gaghị esonye na ya veto Huawei ka Intel, Google na ARM na-aru oru. Mana olee otu o si nwee ike ịgbanahụ veto a?
TSMC anaghị asọpụrụ iwu mbupụ US, nke a nyere Huawei nsogbu
Dabere na mgbasa ozi dị iche iche, isi ụlọ ọrụ nke TSMC dị na Taiwan (ahada aha ya bụ Taiwan Semiconductor Manufacturing Co), yana, ebe ọ bụ na ọ nọghị n'okpuru iwu mbubata na mbupụ nke United States, ọ nwere ike ịbụ onye rụpụtara ndị nhazi Huawei. Ee, ọnwụ nke ogwe aka bụ ihe dị njọ, ma ọ dịkarịa ala ụlọ ọrụ ahụ ka nwere onye na-eweta ọhụụ maka akụkụ a dị mkpa maka ngwaọrụ eletrọniki ọ bụla nke ụlọ ọrụ ahụ.
Ọzọkwa, o yiri ka Huawei ọ maara otú e si ekpuchi azụ ya tupu oge eruo tupu gọọmentị United States ga-ekwe omume. N'ụzọ dị otú a, ụlọ ọrụ Asia nwere ikikere na-adịgide adịgide nke na-enye ya ohere ịnweta ụlọ ARMv8 maka ndụ, nke pụtara na ọ ga-enwe ike ịga n'ihu n'ichepụta mkpụrụ osisi dabere na ụlọ a.
Dị ka anyị tụlerela, ikuku dị mma nke ikuku na-eme ka anyị mata ọdịnihu ọjọọ nke Huawei. Ee, enwere ike na gọọmentị Donald Trump ga-ebuli veto na onye nrụpụta Eshia, mana ụda nke were were mara ụlọ ọrụ ahụ ga-esiri ya ike ịgbake. Hụ nsogbu ndị ị na-enwe, na nke ị nwere ike inwe ọzọ n’ọdịnihu, ị na-eme ị ga-azụta ekwentị mkpanaaka Huawei?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Huawei » Ume ikuku ohuru maka Huawei: ogha n’iru n’iru imeputa ndi Kirin ya
Google Duo na-abawanye ọnụ ọgụgụ nke ndị sonyere na oku vidiyo
Tafayor, a nnọọ ìhè gam akporo antivirus maka mkpanaka gị